A Wanderer's Notebook: January 2008
Posted by Aung Phyoe at 01:56 No comments: Links to this post
Posted by Aung Phyoe at 21:32 1 comment: Links to this post
Blog တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။ Blog ကြော်ငြာပဲဆိုပါတော့ ။ ကြယ်တစ်စု Blog လေးပါ။
Peeves ကိုအားကျလို့ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း (၅) ယောက်စုထောင်ထားတဲ့ Blog လေးပါ ။ တစ်ဦးတည်းပိုင်မဟုတ်ဘဲ တစ်ယောက်ချင်း ရောက်ရာပေါက်ရာရေးကြတာပေါ့ ဆိုပြီး ထောင်ထားကြတာပါ ။
အဖွဲနဲ့ ကျတော့ လူငယ်ဆန်ဆန်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးလည်း ရေးလို့ရတာပေါ့ ။ နောက်တော့ သူငယ်ချင်းချင်းလည်း ဘယ်နေရာရောက်နေနေ အဆက်အသွယ် မပြတ်ကျကြေးဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ပါ ။
Blog ဆိုတာ ကိုယ့်ခံစားချက်၊ နောက်စိတ်ကူးတွေ ... တွေကိုရင်ဖွင့်ရာနေရာလေးပါ ။ ပုဂွိုလ်ရေး ဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှု များကိုတော့ မကြိုဆို လက်မခံချင်ပါ။ ဝေဖန်တယ် ဆိုရင်တောင် အပြုသဘောလေး ဝေဖန်ကြရင် ပျော်စရာမကောင်းဖူးလား ..... ။
(ဆုဝေလွင် ၊ ယဉ်မူယာစိုး ၊ ငြိမ်းဆုလှိုင် ၊ ဇေယျာဝေလင်း နှင့် အောင်ဖြိုး )
ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း (၅) ယောက်လည်း ခင်မင်မှုတွေပွားဝေနိုင်ကြပါစေ ။ နှစ်သစ်မှာ ကောင်းခြင်းကိုရှေးရှု တာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါ ။
Posted by Aung Phyoe at 17:102comments: Links to this post
ဆရာမ မေငြိမ်းရဲ့ 'ချစ်သူသို့ ကြိုဆိုခြင်း'ကိုဖတ်ကြည့်ပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ သိမ်မွေ့တဲ့ အချစ်ကို ခံစားရ ၊ ပြီးတော့ တစ်ဖက်သတ် ဆန်တယ်လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ သောက အချစ်ကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာမိတယ် ။ ဒါတောင်မှ ဇာတ်လမ်းထဲက မိန်းကလေးက မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ် ။ တစ်ဖက်သတ် ချစ်တယ်ဆိုတာ တစ်ခါတစ်ခါ တစ်ယောက်ထဲ ကျိတ်ပျော်ရတတ်တယ် ဆိုပေမယ့်တစ်ယောက်ထဲ တိတ်တိတ်လေးငိုရ တဲ့ အခါတွေကများ တတ်ပါတယ် ။ တစ်ဖက်သတ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ မိန်းကလေးတွေ အတွက်လို့ သာမန်ပြောနိုင်ပေ မယ့် ဖွင့်ဟပြောခွင့်ရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေမှာလည်း တခါတရံမှာ အခြေအနေ အရ တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းမျိုးတွေ လည်းရှိတတ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်ခဲ့ရတာ တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ သူငယ်ချင်းကြီး ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကိုကျိတ်ချစ်နေ တုန်းကပါ ။ သည်ကောင်ကြီး က အတော်ရှက်တတ်တယ် ။ ဖြစ်ချင်တော့ သူ့မိန်းကလေးကလည်း ကျွန်တော်နဲ့ အတော်ခင်တယ် ။ သူမှာ ကျွန်တော်ကို ပြန်မပြောဖို့ ပိတ်ရတာအမော ။ ကျွန်တော် က ပြန်ပြောမယ်ကွာလို့ များစရင် သူ့မှာပျာယာခတ်နေတာ ။ အဲသည်တုန်းကများ သူဘာကြောင့် သည်လောက်ရှက်ကြောက် နေရလဲလို့ နားမလည်နိုင်ဘူး ။ ခုတော့ သည်ကောင်ကြီး ဇွဲဆုလို့ပြောရမလား မသိ ၊ သူ့ကောင်မလေးနဲ့ ဆေးကျောင်း တတိယနှစ်မှာ သမီးရည်းစားဖြစ်သွားကြတယ် ။ (ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း အားလုံးကွဲသွားကြပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ မခွဲဘဲ တစ်မြို့ထဲ တစ်ကျောင်းထဲ မှာအတူတူတက်ရတာ။) ကျွန်တော် ပထမဆုံး သိချင်တာက သူဘယ်လိုများ ကောင်မလေးကို ချစ်ကြောင်းဖွင့်ပြော သလဲပေါ့ ၊ သူ့ခဗျာမှာ ဘယ်လောက်ကျိတ်ကြိုက် ရရှာတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အသိဆုံးပဲလေ ။
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ မှာတော့ ဘယ်သူမှ မသိရပဲ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ယောက်ကို တိတ်တိတ်လေးချစ်နေရ တဲ့ယောက်ျားလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ် ။ သူတို့ဟာ ဖွင့်ပြောဖို့ အတွက်ကြောက်တာမဟုတ်ပေမယ့် ၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် တိတ်တဆိတ်ပဲ (အရိပ်အယောက်လောက်တော့ သတိထားမိရင်သိမှာပါ) ချစ်နေရတဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ် ။ သည်တစ်ခါတော့ အဲသည်လို အချစ်မျိုး အကြောင်းကို ကျွန်တော်မကြာခင်ကမှ ခံစားပြီး ရေးထားခဲ့တာ အတော်လေး Personal ဆန်နေတယ် ထင်ရလို့ ဖြတ်တောက်ပြုပြင်ပြီး တင်ပေး လိုက်ပါတယ် ။
ကျနော်ရင်ထဲမှာ မင်း ကို ချစ်မိနေပြီလို့ သေချာခဲ့တဲ့နေ့ရဲ့ ညမှာ
တောပန်းတွေ ဝေနေအောင်ပန်ထားတဲ့ မင်း ကို
ကျနော် ချောင်းကြည့်နေခဲ့ တယ်လို့
တကယ်တော့ ကျနော်မင်းကိုတွေ့တာ ရိုးရိုးလေးပါ ၊ သည်ပုံစံမျိုးနဲ့ တွေ့ဖူးတဲ့ သူတွေလည်းအများကြီး ။ တစ်ခါတစ်ခါ မထင်မှတ်ရမယ့် တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေ ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှုကိုပြောင်း ပစ်ကြတယ် ။ မင်းကို ကျနော် တွေ့ဖူးတာလည်းကြာပြီ ၊ မြင်ဖူးတာလည်းကြာပြီ ။ မေးထူးခေါ်ပြော အဆင့်လောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အသိအမှတ် ပြုမိကြတာလည်း ကြာလှပြီပဲ ကွယ် ။ ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့မာနကြီးပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ အရေးမစိုက်ချင်တဲ့ ဟန်တွေကြောင့် သိပ်မရင်းနှီးခဲ့ပေမယ့် မှတ်မှတ်ထင်ထင်တော့ ရှိခဲတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့ မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီးသန့် တစ်ဖက်သတ် ခံစားချက်တွေကို ဘာကြောင့်လည်းလို့ အဖြေရှာမိတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေပဲ သိပ်ဆူညံလာရတာ ကလွဲလို့ အဖြေမရတတ်ဖူး ။
ဒါဟာ အချစ်ဆိုတာ သေချာတာပေါ့ နော်။
တစ်ခု သေချာတာကတော့ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာက ကျနော့်အတွက် နွေးထွေးစွာ မကြိုဆိုနိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခု ဆိုတာပါပဲ ။ တစ်ကယ်ပါ ကျနော်တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တမ်းတမ်းတတ ချစ်နေရမှာကို ကြောက်တယ် ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားရခြင်းဆိုတာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူဟာ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲဖြစ်ချင်တယ် ။
တကယ်ပါကွယ် …. ။
ကျနော် ရှုံးမှာကို သိပ်ကြောက်တယ်လေ ။ သည်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ ပြိုင်ဖက်တွေအလယ် ၊ လူတွေအလယ်မှာ ရှုံးမှာထက် မပြိုင်ဘဲ တိတ်တိတ်လေး အရှုံးခံ ရတာကို ပိုပြီးသဘောကျတယ် ။ ဟုတ်မှာပါလေ …..
ဒါဟာ အချစ်မဟုတ်ဖူးလို့ ဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ် ၊ ဒါအတ္တကြီးတာပဲ လို့ စွပ်စွဲကောင်းစွပ်စွဲ လိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိမှာကို ကျနော်သိပ်ကြောက်မိတာ အမှန်ပဲ။
ဒါကြောင့် ကျနော်ဟာ တစ်ယောက်ယောက်အတွက် သီးသန့်ခံစားချက်တွေကို ဘယ်တော့မှလွယ်လွယ် လက်မခံတတ်ခဲ့ဖူး ။ ဒါပေမယ့် ခုတလော မင်းအကြောင်း တွေးနေမိတာ ၊ မင်းအကြောင်းပြောကြရင် နားစွန့်နေ တတ်တာတွေဟာ ကျနော်လက်မခံချင် ပေမယ့် ပြန်တော်လှန်လို့ မရနိုင်အောင် အားကြီးနေပြီ ။ သေချာတာကတော့ ဒါတွေအားလုံးဟာ ဖန်တီးယူနေတာတွေ မဟုတ်ဘူး ။
ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိတယ် ဆိုတာ ဘယ်လောက် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စလည်း ၊ ဘယ်လောက် ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ အခြေအနေလည်း ………….
စိတ်အားငယ်ရတဲ့ အခါ ၊ စိတ်လွတ်လက်လွတ်သိပ်ပျော် ရတဲ့အခါ မှာ မျှဝေခံစားပေးဖို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊
အနည်းဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ် ၊ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို အတူတူခံစား ဖို့ အတွက်ပဲ ဆိုဆို ချစ်သူဆိုတာ လိုတာပေါ့ ။
ဒါတွေကြောင့် တစ်ခါတစ်ခါ ရင်ခုန်သံတွေ သိပ်ကျယ်လောင် တုန်ဟီးလာလို့ ဂမူးရှူးတိုးနဲ့ သတ္တိတွေ သိပ်ကောင်းလာရင် မင်းကိုကျနော်တစ်ခု ဖွင့်မေးကြည့် မိမယ် ။
“ မင်း စာအုပ်တွေဘာတွေဖတ်လားဟင်? ”
“ ရုပ်ရှင်တွေ ဘာတွေရော ကြိုက်လား? ”
မင်းရယ်မိတယ် ထင်တယ် ။ နောက် မင်းရဲ့ ယုံကြည်ပြုံးလေးနဲ့ ခေါင်းခါပြမှာ ပေါ့နော်…… ။
မင်းကို ကြည့်နေတဲ့ ကျနော့်မျက်လုံးတွေ အပြုံးလျော့သွားတာ ကိုတော့ မင်းသိလိုက်မယ် မထင်ဘူး ။
“ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ စွာ
တိမ်တွေက တော့ ကျနော်ပေါ့
မင်းရဲ့ အနီးမှာ ရစ်ဝဲရင်းနဲ့
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သဘာဝတစ်ခုလို့
လူသားတိုင်းလက်ခံ ကြတာပဲ….. ”
ဒါပေမယ့် အချစ်ဆိုတာဟာ တစ်ခါလွှမ်းမိုး ခံရပြီးရင် ထွက်ပြေးရှောင်တိမ်းဖို့ မလွယ်ဖူးနော်ကွယ် ။ စာသင်ခန်းတစ်ခန်းထဲက မင်းကိုချောင်းကြည့်ရတာ ၊ Canteen ထဲမှာ တစ်ခုခု စားနေတဲ့မင်းကို ခိုးကြည့်နေရတာ ဟာ မင်းကို အာရုံထဲက ဆွဲထုတ်ပစ်ဖို့ မလွယ်လို့ပေါ့ ။ ခပ်ပြုံးပြုံး မင်းရဲ့မျက်နှာ ထားကို စိတ်ထဲမှာစွဲနေ တာဟာလည်း ဒါကြောင့်ပဲပေါ့ ။
မင်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောရတိုင်း မင်းရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို ခိုးခိုးကြည့် တတ်တာလည်း အချစ်ကြောင့်ဘဲ ပေါ့ ကွယ် ။ ပြီးတော့ မလုံမလဲ ပြုံးတတ်ပြီး ပျော်နေတဲ့ ကျနော်ကိုရော မင်း သတိထားမိလား ဟင် ။ မင်းမသိဖူး ဆိုရင်တော့ ကျနော့်ဟန်က ပဲကောင်းနေတာလား ၊ ကျနော်ဆိုတဲ့ ကောင်ဟာ မင်းအတွက် သတိမပြုမိလောက် အောင်သိမ်ဖျင်းနေလို့လားဟင် ။ သည်လိုကျတော့လည်း ကျနော်ဝမ်းနည်း ရပြန်တယ်……ကွယ် ။
တစ်ခါတစ်ခါမှ အကြောင်းမဲ့ပျော်ရွှင်ရပြန်တာလည်း မင်းကြောင့်ပဲကွယ် ။ အထူးသဖြင့် အိပ်မက်ထဲမှာပေါ့ ။ အဲသည်မှာကျတော့ မင်းဟာ အပြင်မှာလောက်ကြီး ခပ်တည်တည်မနေ ဖူး ၊ ဟုတ်တယ် မင်းပြုံးနေတယ် ( အပြင်မှာ မြင်နေကျ ဟန်လုပ်ထားတဲ့ အပြုံးမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး) ၊ “ဘာတွေ ဖတ်နေတာလည်းဟင် ၊ တို့ကိုရောမပြချင်ဘူးလား၊ တို့လည်း စာတွေသိပ်ဖတ်တာ”တဲ့ ၊ မင်းဖတ်ချင်ရင် ကိုယ်ဖတ်နေဆဲ မပြီးသေးတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် ငှားဖတ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတယ်ကွယ် ( ကျနော့် စာအုပ်တွေကို သိပ်တိုတတ်တာ မင်း… သိလား) ၊ မင်းထပ်ပြီး ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လေ ဆိုပြီးစိတ်ထဲက မင်းဖတ်ဖို့ စာအုပ်စာရင်းတွေကို အိပ်မက်ထဲမှာတောင် ချရေးပေးလို့ ၊ “ဂျာနယ်ကျော်မမလေး” ရဲ့ “ရင်နင့်အောင်မွှေး” ကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်စေ ချင်တယ် ၊ ကျနော်မင်းကို “မော့်” လို မိန်းမမျိုးသိပ်ဖြစ်စေ ချင်တာပဲ ။ မင်းရယ်တယ်လေ …… “ဟားဟား…… ရှင့်စာအုပ်ကို ငှားဖတ်တာနဲ့ ကျမကို ရှင်ဆရာလုပ်နိုင်မယ် ထင်လား……၊ ယောက်ျားတွေရဲ့ ဆရာလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကို ကျမအမုန်းဆုံးပဲ” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ စာအုပ်ကို ချပြီးမင်းလှည့်ထွက်သွားတယ် ၊ နောက် မင်းကျနော်ကို ခပ်ပြုံးပြုံးလေး သမင်လည်ပြန်လှည့် ကြည့်တယ် ။ ဘာသဘော လည်းကွယ် ………. ၊
အိပ်မက်ဆိုတာကောင်းခန်းမှာ ပျက်တတ်တယ်ဆိုတာတကယ် ပဲ ၊ အဲသည်မှာပဲ ကျနော်လန့်နိုးသွားတယ် ။
မင်းကျနော့်ကို အထင်သေးသွားတာလား ၊ စိတ်ပျက်သွားတာလား ……. ။
ကျနော့် ကို ပျက်ရယ်ပြုတာကို သိပ်မုန်းတယ် ၊ မင်းအပေါ်စေတနာပိုမှု (ကျနော့်အချစ်) ၊ ကျနော့် မျှော်လင့်ချက်တွေကို ရယ်သွေးတတ်တာကိုရော သိပ်ခံပြင်းတယ် ။
သည်လို အစော်ကားခံရမှာကို ဘယ်လိုမှခံနိုင်ရည် မရှိဘူး ။
အို……….. မင်းကို ချစ်တယ်လို့ များ ဖွင့်ပြောမိရင် မင်းအနည်းဆုံးတော့ ဟားမှာပါ… ။ မင်း ….. အခြားကောင်လေးတွေ ကို ငြင်းလိုက်သလိုပေါ့ (မင်း အခြားကောင်လေးတွေကို ဘယ်လိုငြင်းလည်းတော့ ကျနော်မသိဘူး ၊ မင်း အချစ်ကိစ္စ တွေ အကြောင်းကိုလည်း မစုံစမ်းရဲ လို့ မစုံစမ်းခဲ့ဘူး။ ) ဒါထက်ကျနော် ကံဆိုးရင်တော့ “ကျမမှာ ချစ်သူရှိပြီးသားရှင့်” လို့ မင်းပြုံးပြုံးလေးပြောလိမ့် မယ် ။ အရှုံးသမားကိုယ့် ကို နည်းနည်းလေးမှ အရေးစိုက် အားနာဟန်မရှိတဲ့ အပြုံးမျိုးနဲ့လေ ။
သည်လို အခြေအနေတစ်ခုကို ကျနော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ ရင်မဆိုင်နိုင်ဘူး ကွယ် …..။
မင်းသည်လို ငြင်းသည့်တိုင် ကျနော်မင်းကိုမေ့ နိုင်၊ မုန်းနိုင်မှာမှ မဟုတ်ဘဲ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လက်တည့်စမ်း ရည်းစားစကားပြောပြီး အဆင်မချောရင် အသစ်တစ်ယောက်ရှာတယ် ဆို့တဲ့ ယောက်ျားမျိုးထဲမှာ ကျနော်မပါဘူးနော် ။
တစ်ခါတစ်ခါ ပင်ပန်းလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မှိုတ်သွားတတ်တဲ့ မင်းမျက်လုံးတွေရဲ့ မြင်လွှာ အာရုံမှာ ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေများရှိနေမှာလား ဟင် …….
ဒါမှမဟုတ် တစ်ခါတစ်ခါ ကျနော်သိပ်ချစ်ရတဲ့ အပြုံးနဲ့ (ကျနော်ကို ဘယ်တုန်းကမှ ပြုံးမပြခဲ့ဖူးတဲ့ အပြုံးမျိုးပေါ့) မင်းပြောနေတတ်တဲ့ ဖုန်းရဲ့အခြား တစ်ဖက်မှာ မင်းမြတ်နိုး အားကိုးရတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်များ ရှိနေလား ဟင်….
ဟင့်အင်းကွာ…………… ဒါတွေလည်းကျနော်မသိချင်ဘူး ။
ကျနော်မင်းကို တိတ်တိတ်လေးပဲ ချစ်နေရရင်တော်ပါပြီကွယ် ။
ကျနော့် အချစ်မှာ မျှော်လင့်ခြင်းမပါ ၊
ရမ္မက် မပါ ။
ပေးဆပ်ခြင်း ၊ ရယူခြင်းဆိုတဲ့ သာမန်အချစ်ရဲ့ သတ်မှတ်မှုတွေ မပါ။
ဒီအချက်တွေ ကင်းလွတ်နေပေမယ့် ……
ဒါခံစားချက်တွေဟာ အချစ်ဆိုတာသေချာပါတယ် ကွယ် ။
ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ မကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် …….
ကျနော့် အချစ်ဟာ ကြုံ့ဝင်ပျောက်ကွယ် သွားမှာမျိုးမဟုတ်ဘူး ။
ကျနော်ချစ်ရသူကို ကျနော့် (မင်းနားမလည်နိုင်တဲ့) အချစ်တွေနဲ့ပဲ တတ်နိုင်သမျှ ချစ်ချင်နေတာလေ ။
အိပ်မက်တွေကိုချစ်တတ်တဲ့ ကျနော် အိပ်မက်တစ်ခုကို ပြန်သတိရမိတယ် ။
ကျနော် ချောင်းကြည့်နေခဲ့ တာ
အိပ်မက်ထဲမှာ မပါပေမယ့် တစ်ခုတော့ သေချာတယ်……
ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို ငိုချပစ်ချင်နေမိတယ် ကွယ် …….
မာန်တင်း ၊ ဟန်ဝင်းတဲ့ အပြုံးမျိုးနဲ့
မာနတွေ ၊ အတ္တတွေကို ပိုက်ထွေးရင်း…
တစ်ခုတော့ သိချင်နေမိတယ် …
မင်းနဲ့ ကျနော့် ကြားက
ဘယ်သူစိုက်ခဲ့တာလည်း လို့ပါ ?…………. ။ ။
(၂၄ ရက် ၊ ဒီဇင်ဘာ)
Posted by Aung Phyoe at 00:343comments: Links to this post
ခုနှစ် သက္ကရာဇ် တစ်ခုကုန်ဆုံးသွားပြီ ။
အရင်တုန်းကတော့ သိပ်ပြီး သတိမမူ မိလို့ ခပ်ပေါ့ပေါ့သဘောထားခဲ့ ၊
ခုတော့ လျင်မြန်စွာ ကျော်လွန်သွားတဲ့ နှစ်တွေကို ပြန်မျှော်ကြည့်တော့ တမေ့တမောကြီး ၊
အောင်မြင်မှု တွေထက် ဆုံးရှုံးမှုတွေ များပေမယ့် သက်တောင့်သက်သာ ရှိခဲ့သည်။
လူငယ်ဘ၀ကို ကူးပြောင်းစ မကြာသေးတဲ့ ခုနှစ် သက္ကရာဇ်တွေ
ပေါက်ကွဲခဲ့ ၊ ဆုံးရှုံးခဲ့ ၊ တိတ်တိတ် ငိုကြွေးခဲ့ ရတာတွေ ....
တည်ငြိမ်မှုကို ရှေးရှုဖို့ အချိန်တန်ပြီ ။
နှစ်သစ်မှာ စိတ်ပျက်ဖွယ် အဟောင်းတွေကို ကျောခိုင်း ....
လူသားဆန်တဲ့ တည်ငြိမ်မှု ၊ ပျော်ရွှင်မှု တွေကို မျှော်မှန်း ....
တာဝန်ယူနိုင်စိတ် ၊ မိမိကိုယ် မိမိ လေးစားနိုင်အောင် .....
မိမိအောင်မြင်မှု ၊ ဆုံးရှုံးမှု တွေကိုလည်း ဂုဏ်ယူနိုင် ၊ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်အောင် .....
မိမိ စိတ် ကြေးမုံပြင် ကို သန့်ရှင်း ။
သည်နှစ်သစ်ကို တတ်နိုင်သလောက် အပျော်နဲ့ ကြိုခဲ့တယ် ။
မိမိ ကိုယ်ကို သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ် အောင်ကြိုး စားမယ်လို့ မိဘတွေကို ကတိပြုရင်း နှစ်သစ်ကို ကြိုခဲ့တာ ။
နှစ်သစ်မှာ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား အားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ ။
မောဟ ၊ အတ္တ ၊ လောဘ အမှောင်တွေ ဖုံးလွှမ်းခြင်းလည်း ကင်းဝေးပါစေ ။
စစ်ဘေး ၊ စစ်ဒါဏ် အပေါင်းမှလည်း ဝေးပါစေ။
နှစ်သစ်ကို ပျော်ရွှင်ရမယ့်မျှော်လင့်ချက် အလင်းတန်းတွေနဲ့ ကြိုကြစို့ကွယ် ..... ။
နှစ်သစ် ၂၀၀၈ ။ ။
Posted by Aung Phyoe at 22:58 No comments: Links to this post